Magacyada saraakiisha loo doortay inay hogaamiyaan Ciidamada Amniga Qaranka - Axadle – Axadle
Magacyada saraakiisha loo doortay inay hogaamiyaan Ciidamada Amniga Qaranka – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Muqdisho (sh.M. Network) Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon Sheekh Axmed ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay Caasimadda Muqdisho.
Masuuliyiintani waxay doorteen ama magacaabeen gudi ka kooban 7 xubnood oo ka kooban xubnaha ciidamada, oo ka kooban gudoomiye, gudoomiye ku xigeen iyo afhayeen.
Guddoomiyaha guddiga waxaa loo doortay Jeneraal Cali Cosoble Caraay (Gacma-dule), halka ku-xigeenkeenna loo doortay Jeneraal Indha Cade, afhayeenka Gaashaanle Diini Rooble Axmed.
Guddiga ayaa la baxay magaca Ciidanka Badbaadinta Qaranka waxaana ku jira khubaro. Xubnaha waxaa ka mid ah Jeneraal Cabdimaalik Ismaaciil, taliyihii hore ee ciidamada Danab, Korneel Saney Cabdulle, Kornayl Cismaan Xaadoole iyo Jeneraal Saadaq John.
Sida aan xogta ku helnay guddiga ayaa la kulmi doona ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyagoo kala hadli doona go’aan xalay ka dhacay Caasimadda Muqdisho.
Go’aannada la gaadhay ayaa ah inay qayb ka yihiin qorshooyinka looga saarayo dhabarka halka ay ka yimaadeen ama sababta ay uga baxeen. R / wasaare Rooble ayaa ku howlan xal u helida xaalada Caasimadda Muqdisho oo wali ah mid militari.
Sida ay ilo xog ogaal ah u sheegeen Axadle, saraakiisha ayaa sidoo kale isku raacay in aan laga bixin xarumahooda Caasimadda Muqdisho ilaa inta uu raiisul wasaare Rooble ka qaadayo talaabo lagu kalsoonaan karo kana dalbaday inuu badalo taliyayaasha ciidamada dowlada. Ku lug lahaanshaha dagaalka ka dhanka ah musharixiinta madaxweynaha 25-ka Abriil.
Waxay yiraahdeen kahor intaan Axadle laga saarin oo lagama maarmaan ahayd si loo hubiyo in Raiisel Wasaaraha uu furay dadaalkiisa daacada ah si uu usii wado una noqdo dhiiri galin, waxay ahayd aragti uu dib ugu soo celiyay gacanta Golaha Wasiirada, taas oo ka dhigaysa aargoosiga dadka ka soo horjeeda ciidamada mid adag oo ka dhan ah kordhinta.
Barcelona Oo Ganaax Sugayo – Kulankii Lionel Messi U Qabtay